သန်းရွှေ ပုံတူ ထုထားတဲ့ ဆင်းတုကို သွားပူဇော်တဲ့ Mr.Pak Ui-Chun | ဒီရေ
သန်းရွှေ ပုံတူ ထုထားတဲ့ ဆင်းတုကို သွားပူဇော်တဲ့ Mr.Pak Ui-Chun
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပတ်ဝေ့ချွန်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေရဲ့ ကျောက်စိမ်း ဆင်းတုတော်အား သွားရောက်ကြည်ညိုစဉ် “အင်း.... တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တူနေသလိုလို”
ရန်ကုန်မြို့ကို ယနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပတ်ဝေ့ချွန်းဟာ ဒီကနေ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားရောက် ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေပုံနဲ့ တူအောင် ထုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ကျောက်စိမ်းဆင်းတုတော်ကို သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကျောက်စိမ်း ဆင်းတုတော်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ မျက်နှာနဲ့ တူအောင် ထုလုပ်ထားတာ ဆိုပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနဲ့ ရန်ကုန်မြိုနေ ပြည်သူလူထုကြားမှာ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ယခင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ တို့လာရောက်ခဲ့စဉ်မှာ အဆိုပါ ကျောက်စိမ်းဆင်းတုတော်ကို သွားရောက် ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုစဉ်က မြန်မာ့အရေးအတွက် ဆင်ဖမ်းမယ်၊ မြင်ဖမ်းမယ် ဆိုပြီး ဒေါင်းတင်မောင်းတင် လာရောက်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီတို့ဟာ မိမိတို့ ပြောလိုသော စကားများ အရာမထင်ပဲ စစ်အာဏာရှင်များရဲ့ စကားကိုသာ နားထောင်ပြီး လက်ချည်းဗလာ ပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ ထွက်ပေါ်လာသော သတင်းများအရ နိုင်ငံတကာသံတမာန် အထူးပုဂ္ဂိုလ်များ လာတိုင်း နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်များအား မတွေ့ဆုံခင် အဆိုပါ ကျောက်စိမ်းဆင်းတုတော်အား သွားရောက်ဖူးမြော်စေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ခံများနဲ့ ဝေဒပညာရှင်များ ပြောဆိုချက်အရ လာရောက် လည်ပတ်သော နိုင်ငံတကာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဗိုလ်သန်းရွှေနှင့် တူသော ကျောက်စိမ်းဆင်းတုတော်အား ဖူးမြော်စေခြင်းဖြင့် တမင် ယတြာချေ နံနှိမ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။
ယခုတစ်ဖန် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား သွားရောက်ဖူးမြော်စေပါတယ်။ သို့ပါသော်လည်း ယခုမြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ ယခင် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းနှင့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီတို့ကဲ့သို့ တစ်လေးတစ်စား ဖူးမြော်ချင်း မဟုတ်ပဲ စိတ်ဝင်စားဟန်မပြ ကြည့်ရုံသာ ကြည့်နေတဲ့ အတွက် နအဖရဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားအပေါ် နာမ်နှိမ် ဖျံကျမည့် အစီအစဉ်များ အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား မသူတော်ချင်းချင်း မိစ္ဆာအချင်းချင်း မြွေမြွေချင်း ချေမြင်နေကြသလားဆိုတာ ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရင်း....
မိစ္ဆာအာဏာရှင် မင်းမိုက်တွေရဲ့ မြောက်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး မျောက်ဇာတ်ခင်းနေတဲ့ အကြောင်းကို ကိုရင်နော်ရဲ့ မျောက်မင်းမိုက် ကဗျာလေးနဲ့ ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Than Shwe is building and renovating pagodas with the same purpose in mind, believing they possess supernatural properties to protect his position of power. This belief slots nicely into the Burmese tradition of yadaya, the form of magic employed to ward off evil spirits, ensure good fortune and confound enemies.
Some scholars say yadaya was first practiced by Ari monks of the Pagan period. According to the historian Maung Maung Tin, author of “Myanma Min Okchokpon Sadan” (“Treatise on the Administration of the Burmese King”), yadaya was “based on the belief that whatever circumstances arose could be managed by performingacertain act or ritual so that one can either avert misfortune or fulfill desires.”
From the "Pagoda Power" by ARKAR MOE
http://www.demowaiyan.co.cc/2010/07/blog-post_6468.html မှ ပြန်လည်ကူးယူးဖော်ပြသည်။